Ogaden News Agency (ONA) – Human Rights Watch oo Beenisay inay taagersantahay Caawimada UK siiso Liyu Poliska
Human Rights Watch oo Beenisay inay taagersantahay Caawimada UK siiso Liyu Poliska
Haayada Xuquuql Insaanka ee Human Rights Watch ayaa dhaleeceyn usoo jeedisay Wasiirka Arrimaha Deeqaha Wadanka UK marwo Lynne Featherstone. Haayadan HRW ayaa dhaleecayntan kusoo saartay warqad ay u direen The Guardian oo ay kaga jawaabayeen warqadi wasiirku u dirtay Guardian.
Gudomiyaha Human rights Watch ee fadhigiisu yahay wadanka UK ayaa sheegay inaysan ku taagersaneyn dowlada UK deeqda ay siiso qawlaysatada Liyu poliska ee xasuuqa ka geysta Ogadeniya. Waxa aan kasoo horjeedna qoraalki ay soo saartay wasiirku ay ku sheegtay inaan kala shaqeynayno wadanka UK ama siku firkarad aanu ka sidano sida loola dhaqmayo liyuu poliska midaas ma jirto isku aragtina kama nihin Dowlada UK arrintaas.
Liyu poliska waa maleshiyaad mooriyaan ah oo aan aheyn haayad sharciyaysan, waxaaanu soo saarnay dhowaan dad maxaabiis u ah oo ay xasuuqeen oo gaadhaya 10 qof iyo dadbadan oo kale oo tuladaas ay dadka ku laayeen dagana.
HRW ma ay taagersana in dowladaha deeqda bixiya ay siiyaan dhaqaalihi lagu tababari lahaa maleshiyaadkan xasuuqa geysanaya iyo dowlada Ethiopiaba oo aan laheyn meel cad oo loo raaci karo. Dowlada Ethiopia ma ay ogola in baadhitaan lagu sameeyo falalki ay gaysteen ee hore iyo gumaadka ay hadda ka wadaan midna iyada oo aysan jirin cid lagu xukumayo danbiyada ay geystaan.